Ixabiso eliphantsi lokuLungiselela ukuThengisa kunye nokuDlulisa abaThengi boMatshini boMxhasi kunye neFektri | YiZheng
Yintoni umatshini wokulayisha kunye nokondla?
Ukusetyenziswa kwe Ukulayisha kunye noMatshini wokuTyisa njengendawo yokugcina izinto eluhlaza kwinkqubo yemveliso yesichumiso kunye nokulungiswa. Ikwaluhlobo lwezixhobo zokuhambisa izinto ezikhulu. Esi sixhobo asikwazi ukuhambisa kuphela izinto ezintle ezinobungakanani bamasuntswana angaphantsi kwe-5mm, kodwa nezixhobo ezikhulu kakhulu kune-1cm Inokulungelelanisa okunamandla kunye nokuhambisa amandla okuhambisa kunye nokuhambisa okufanayo ngokufanayo kwezinto ezahlukeneyo. Izixhobo zixhotyiswe nge-anti-smashing net, isixhobo sokuthintela ukuthintela ukuthintela, isantya sokuguqula isantya esilawula isixhobo, sinokufezekisa ukukhutshwa okufanayo kunye nolawulo oluchanekileyo lokukhutshwa komthamo.
Wenza ntoni umatshini wokulayisha kunye nokondla?
Njengenkqubo enye, inkqubo ye- Ukulayisha kunye noMatshini wokuTyisa isetyenziselwa ukulayisha izinto ezivela kwifolokhwe. Isetyenziswa ngokubanzi ukuhambisa umgubo, igranule okanye izinto ezincinci zebhloko, ihlala inokusetyenziswa nomnye umatshini. Iyakwazi ukufikelela ngokufanayo kunye nokuqhubeka nokugcina umsebenzi kunye nokuphucula ukusebenza komsebenzi kumgca wokuvelisa isichumisi.
1. Isitya esityikityiweyo samkela ipleyiti yearc ephindwe kabini ukukhusela ngokufanelekileyo ukuvuza.
2.Umxokelelwane wokubambeka wamkela ubume apho umthwalo uthwele kunye nokutsalwa kwahlulwe, okuphucula ukubanakho kwesitya seplate ukumelana nomthwalo wempembelelo.
3. Isixhobo sokuxhathisa umsila sinikezwe nge-disc yasentwasahlobo, enokunciphisa umthwalo wempembelelo kwityathanga elicothayo kunye nokuphucula ubomi benkonzo yetyathanga.
4. Isondli seplate yeplate inamalungu amahlanu: isixhobo sokuqhuba kwentloko, isixhobo sevili lomsila, isixhobo sokudibanisa, ipleyiti yetyathanga kunye nesakhelo.
5. Umsila une-absorber yothuse kwizifunxi ezothusayo, kwaye umbindi unenkxaso ekhethekileyo ye-absorber roller yokuphucula ibhloko enkulu. Izinto eziphathekayo zichaphazelekayo yimpembelelo yee-roller kunye neeplate ze-groove kumacala omabini ukuphucula ubomi bezinto eziqhubayo.
Ukulayisha kunye noMatshini wokuTyisa Yenziwe yinkqubo enobunzima, indlela yokuhambisa ipleyiti, isililo kunye nesakhelo; apho ipleyiti yetyathanga, ikhonkco, ipini, iroller kunye nezinto ezifana neendlela zokuhambisa zinxibe iinxalenye ezinamandla ahlukeneyo kunye nezixhobo. Ukunxiba kokuqala kunye nokunxaxha kweenyembezi kufuna ukugcinwa rhoqo kunye nokutshintshwa; Umxhasi weplate yeplate unobunzima obuphezulu kwaye unokuziqhelanisa nesiqwenga esikhulu sezinto kunye nembewu ethile. Umthamo we-hopper mkhulu, onokuthi ulinciphise ngokufanelekileyo ixesha lokondla ifolokhwe, kodwa kwangaxeshanye isantya sokuhambisa ipleyiti siyacotha, sithwele amandla amakhulu.
Ukulayisha nokuThengisa umatshini weVidiyo
Ukulayisha kunye nokuTya umatshini wokuKhetha iModeli
Ukuxuba amandla: 2.2kw
Amandla ombane: (0.37kw
Imveliso yamandla: 4kw frequency frequency
Amandla ombane: 0.37kw
Imveliso amandla: 4kw amaza uguqulelo
Egqithileyo Umatshini wokudibanisa idiskhi nkqo
Okulandelayo: Oluzenzekelayo Packaging Machine